भोलिदेखि सीईडीबी हाइड्रोपावरको आईपीओ निष्कासन हुने, कसले कति पाउँछन् ? | Ratopati
भोलिदेखि सीईडीबी हाइड्रोपावरको आईपीओ निष्कासन हुने, कसले कति पाउँछन् ?
काठमाडौं । सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले भोलि वैशाख १७ गतेदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अङ्कित दरको २५ लाख १८ हजार २३० कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो । सो मध्ये कम्पनीले २% अर्थात ५० हजार ३६५ कित्ता सेयर कर्मचारी र ५% ले हुने १ लाख २५ हजार ९११ कित्ता सेयर म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएको छ । बाँकी २३ लाख ४१ हजार ९५४ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सकिने छ ।
कम्पनीले सन् २००९ मा स्थापना सीईडीबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको चालू आ.ब. मा प्रतिसेयर आम्दानी १३/५ र प्रति सेयर खुद सम्पत्ति १३८.७९ रहेको छ । कम्पनीले आ.व. २०७५÷०७६ मा १०.५४ प्रतिशत र २०७६÷०७७ मा ७.३७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न सफल रहेको छ भने कम्पनीले आगामी आ.व. मा पनि लाभांश प्रदान गर्नेसमेत प्रक्षेपण गरेको छ ।